अटो तथा ई-रिक्सा चालकलाई प्रशिक्षण – Rajmarg Online
अटो तथा ई-रिक्सा चालकलाई प्रशिक्षण
दाङ, पुस १४ । दाङको घोराही बजारमा सञ्चालन हुँदै आएका अटो तथा ईरिक्सा चालकहरुलाई प्रशिक्षण दिईएको छ । ट्राफिक नियम तथा व्यवस्थापनका विषयमा अटो तथा ईरिक्सा चालकलाई प्रशिक्षण दिईएको हो ।
अटो तथा ईरिक्सा संयुक्त व्यावसायी समितिले आयोजना गरेको भेलामा सवारी दुर्घटना न्युनिकरणका लागि अटो तथा ईरिक्सा चालकहरुलाई सचेत बनाईएको जिल्ल ट्राफिक कार्यालय दाङका प्रमुख मदनबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समय अटो तथा ईरिक्साका कारण सवारी दुर्घटना बढेको ब्यापक गुनासो आएपछि चालकहरुलाई प्रशिक्षित गरिएको हो ।
चालकहरुले ट्राफिक नियमको पालना गर्नुपर्ने, तोकिएको स्थानमा पार्किङ गर्नुपर्ने, तोकिएको भाडादर लागु गर्नुपर्ने लगाएतका विषयमा जानकारी दिईएको हो । समितिका अध्यक्ष कोमलबहादुर बस्नेतको अध्यक्षता तथा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ का अध्यक्ष शक्तिराम डाँगीको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको हो ।
कार्यक्रममा दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण भुषाल, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सविन प्रियासन, घोराही नगर विकास समितिका अध्यक्ष बसन्त चौधरी, एभरेष्ट विमा कम्पनीका डा. लोकराज पराजुली लगाएतले बोल्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथी वडा अध्यक्ष डाँगीले अटो तथा ईरिक्सा चालकलाई समस्यामा पार्ने गरेर कुनै पनि नीति निर्माण नभएको बताउनुभयो । अटो तथा ईरिक्सालाई व्यवस्थित पार्ने गरी योजना निर्माण गरेर काम सुरु गरेको भन्दै उहाले कानुन विपरित कुनै कार्य नगर्न पनि उहाले आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै उहाहरुले स्मार्ट शहर निर्माणका लागि अटो तथा ईरिक्सा व्यावसायीहरु लगनशील र व्यावसायप्रति कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्ने बताउनुभयो । एक दुई जना अटो तथा ईरिक्सा चालकका कारणले सबैको नाम मुछिने गरीएको भन्दै सम्पुर्ण अटो तथा ईरिक्सा चालकहरुले आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्न आग्रह गुर्नभएको छ ।